Etu ị ga - esi kpanye iPhone: Ntuziaka Iji Nwee Onwe Onye Ozo! - Iphone
ekwentị m agaghị agbanyụ
ihuenyo iphone m agaghị abịa
Onye nrụpụta ngwa on iphone 6
onye bi ebe ahụ nwere ike ịjụ nne na nna ha
gịnị kpatara ekwentị m anaghị eziga imessages
Etu ị ga - esi kpanye iPhone: Ntuziaka Iji Nwee Onwe Onye Ozo!
Tochọrọ sọfụ weebụ na laptọọpụ gị ma ọ bụ mbadamba, mana ị nweghị njikọ Wi-Fi. Ikekwe ị nụtụla banyere onye hotspot nke mbụ, mana ị maghị otu esi edozi ya ma ọ bụ otu ọ ga esi emetụta atụmatụ data gị. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe tethering bụ , olee otú tetụ iPhone na ngwaọrụ ọzọ , na otu ịtọlite ​​hotspot nkeonwe na-emetụta atụmatụ data ikuku gị .
Gịnị bụ Tethering?
Tethering bụ usoro ijikọ otu ngwaọrụ na nke ọzọ iji jikọọ na ịntanetị. Na-emekarị, ị kpọgidere ngwaọrụ na-enweghị atụmatụ data (dịka laptọọpụ gị ma ọ bụ iPad) na ịntanetị na-eji atụmatụ data iPhone gị.
Okwu ahụ bụ “tethering” bụ nke amaara site na iPhone jailbreak community n’ihi na mbụ ị nwere ike tether na a jailbroken iPhone. Lelee ederede anyị ka Mụta ihe banyere jailbreaking ihe iPhone .
Taa, ikike nke tetherị iPhone bụ atụmatụ njirimara nke ọtụtụ atụmatụ data ikuku, ma ugbu a ka a na-akpọkarị 'hotspot onwe onye.'
Etu ị ga - esi kpuchido iPhone na ngwaọrụ ọzọ
Iji tetụ iPhone, mepee Ntọala wee pịa Akwụkwọ akụkọ nkeonwe . Mgbe ahụ, kpatụ mgba ọkụ na-esote Personal Hotspot iji gbanye ya. Ga-ama ngbanye na-acha akwụkwọ ndụ.
Na okpuru menu nhọrọ nke onwe, ị ga-ahụ ntuziaka maka ụzọ atọ ị nwere ike isi jikọọ ngwaọrụ ndị ọzọ na hotspot nke onwe gị igbanyela: Wi-Fi, Bluetooth, na USB.
kedu ihe ọ pụtara ma ọ bụrụ na ị na -arọ nrọ maka oke ifufe
Mgbe ị rụzuru iPhone gị na ngwaọrụ ọzọ na iji Personal Hotspot, ị ga-ahụ ọkwa na ogwe na-acha anụnụ anụnụ n'elu ihuenyo iPhone gị nke na-ekwu, 'Personal Hotspot: # Connections'.
Ekwesịrị m iji Wi-Fi Ma ọ bụ Mobile Hotspot?
Anyị na-akwado ka ị jiri Wi-Fi mgbe niile mgbe ọ dị. Ijikọ na Wi-Fi anaghị eji data iPhone gị eme ihe ma ọsọ gị agaghị enweta Gafere - nke pụtara na ị ga-akwụsịlata mgbe i jirila ụfọdụ data. Wi-Fi na-adịkarị ngwa ngwa karịa ebe mkpanaka mkpanaka agbanyeghị, agbanyeghị na ntụgharị.
Ego Ole Ka Hotspot Nkeonwe Na-eji Na My iPhone?
N'ikpeazụ, nke ahụ dabere na weebụsaịtị ndị ị gara na ihe ị na-eme n'ịntanetị. Ihe omume dị ka vidio vidio na Netflix na ibudata faịlụ buru ibu ga-eji ọtụtụ data karịa ma ọ bụrụ na ị na-abanye na ntanetị.
Ọ bụrụ na m nwere data na-akparaghị ókè, ọ na-efu ego iji melite Hotspot nkeonwe?
Ọnụ ego nke iji hotspot nkeonwe dịgasị dabere na onye na-eweta ikuku gị na ụdị atụmatụ ị nwere. Site na atụmatụ data na-akparaghị ókè ọhụrụ, ị ga-enweta ụfọdụ data na nnukwu ọsọ. Mgbe ahụ, gị wireless na-eweta akpịrị ojiji data gị, nke pụtara na data ọ bụla ị jiri mgbe ị ruru na njedebe ga-adị nwayọ nwayọ. Yabụ, ọ bụ ezie na ịgaghị akwụ gị ụgwọ ihe ọ bụla, ọsọ ịntanetị ga-adị nnọọ obere.
N'okpuru, anyị mepụtara okpokoro nke na-atụle atụmatụ data na-akparaghị ókè nke ndị na-ebu ikuku na otu esi emetụta ikike i nwere iji hotspot mkpanaka na iPhone gị.
Ọnụ ọgụgụ nke data tupu ịda mba
Ọnụ ọgụgụ nke Personal Hotspot Data Tupu Throttling
Hotgba ọsọ nke Onwe Onye mgbe Thghasịrị
AT&T 22 GB 15 GB Ugboro abụọ
Sprint Okporo ụzọ netwọk 50 GB 3G
T-ekwentị 50 GB Unlimited 3G ọsọ ọsọ nkeonwe
Ndụmọdụ maka Iji Mobile Hotspot Na Gị iPhone
Ọ bụrụ na ị na-agbatị iPhone gị na Mac gị, mechie mmemme niile dị na ndabere nke Mac gị nwere ike iji data ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ngwa ngwa Mail na-enyocha mgbe niile maka ozi ịntanetị ọhụrụ, nke nwere ike ịbụ nnukwu nsị na atụmatụ data gị.
Jiri Wi-Fi mgbe niile kama iji ekwentị mkpanaaka.
Iji ekwentị hotspot na iPhone gị na-ehichapụ batrị ya ngwa ngwa, yabụ gbaa mbọ hụ na ị na-ahụ ndụ batrị tupu ịgbanye!
Nweta ịntanetị n’ebe ọ bụla Go Gara!
Ugbu a ị mara otu esi etinye iPhone ma debe hotspot onwe gị ka ị nwee ike ị na-agagharị na weebụ, ọbụlagodi na-enweghị Wi-Fi. Anyị na-atụ anya na ị ga-ekerịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ hapụ anyị okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ iPhone ndị ọzọ metụtara. Daalụ maka ịgụ ihe, ma cheta mgbe niile ka Payette Gaanụ n'ihu!